Indwangu ye-China Reusable Lunch Insulated Lunch Box Canvas Indwangu ene-Aluminium Foil, Lunch Tote Handbag Yabesifazane, Amadoda, Isikole, Ukukhiqizwa Kwehhovisi kanye neFektri | Umzingeli omusha
Indwangu Yesikhwama Sokudla Kwasemini Esisebenzisekayo Esenziwe Nge-Canvas Indwangu ene-Aluminium Foil, Isikhwama Sokudla Kwasemini Kwabesifazane, Amadoda, Isikole, Ihhovisi
Ikhodi yomkhiqizo: I-HT46011
Usayizi (mm): 211 * 165 * 266mm
Umbala: Noma imuphi umbala we-pantone
Intengo ye-FOB: $ 2.10- $ 2.40
Isikhathi sokuthumela: Cishe izinsuku ezingama-40-60
OKWENZEKAYO: I-foam ye-EPE eshisiwe efakwe ngaphakathi ingafakwa ngaphakathi ingagcina ukudla kwakho kuhlala kufudumele / kubanda / kuhlanzekile amahora, kungangenwa manzi, kulula ukuhlanza i-BPA mahhala. Sithuthukisa i-Velcro top endala ibe yi-hook ne-loop Velcro ukuze siyenze isebenze kangcono.
KUPHEPHILE & KUSETSHENZISWE: Lesi sikhwama sasemini siphephile ekudleni, i-100% ayinabo ubuthi, ubufakazi obumanzi, ukumelana nolaka nokulwa nokonakala, okukunikeza ukusetshenziswa okuhlala isikhathi eside.Ngaphandle kwalokho, yakhelwe ngephakethe langaphakathi lokubeka okhiye, ifoni, amakhadi noma isikhwama sakho semali.
UKUKHONZA OKUKHULU: Ubukhulu: 8.3Lx6.5Wx10.5H amayintshi, anesibambo eside esithuthukisiwe.Le tote yasemini ilungele ukupakisha ukudla okuningi, noma ingaqukatha ukudla kosuku lonke okudingayo, okulungele umsebenzi, ukusetshenziswa kwangaphandle nokusetshenziswa kwansuku zonke.
Okuphindaphindwayo: Lesi sikhwama esikhishwa kabusha se-canvas sinikeza isisombululo esikhangayo nesingasindi ezidingweni eziningi zokugcina. Kuyindlela esefashinini yokuphatha ukudla, ukudla okulula, iziphuzo, iziphuzo zabesifazane, abesilisa nezingane, noma umane nje uyisebenzise njengesikhwama sokubamba.
Ulwelwesi lwe-aluminium oluhlala isikhathi eside olulula ukuluhlanza futhi alunamakhasi we-BPA.
-Extra ukushwaqa kwe-EPE form insulation kugcina ukudla kupholile futhi kukusha.
-Roomy ngokwanele ukubamba ibhodlela lamanzi, isiqukathi esisodwa noma ezimbili kanye nezicucu ezimbalwa zezithelo.
-Uhlonyelwe isikhwama sangaphakathi sokubeka amakhadi akho, ifoni, isikhwama semali nokhiye.
-Indlela esefashinini yokuphatha ukudla, ukudla okulula, iziphuzo, iziphuzo, futhi isipho esihle kubantu abadala, abesifazane, amadoda, amantombazane asakhula nabafana!
-Yenza ukuhleleka kwakho kokudla kube lula futhi kukhanyise impilo yakho yansuku zonke enempilo kusukela manje.
-Ihlinzekwe ngephethini yesitayela, isikhwama sasemini se-HOMESPON senzelwe ukuthi sibe yitoti KUMELE UTHOLE I-VERSATILE.
-Izinto ezibonakalayo: Ukotini nokwakheka kwe-Aluminium
-Size: 8.3Lx6.5Wx10.5H amayintshi
-Izintambo ezimbili zikakotini eziqinile ezibanzi zivumela ukuthi isikhwama sigqokwe engalweni noma esandleni, uzokwazi ukupakisha futhi uphathe isidlo sasemini esinempilo nomaphi lapho uya khona.
Langaphambilini Izikhwama Zethenisi Ezinkulu Zabesifazane Nabesilisa Zokubamba I-Tennis Racket, I-Pickleball Paddles, I-Badminton Racquet, I-squash Racquet, Amabhola Nezinye Izesekeli
Olandelayo: Isikhwama esikhulu se-Backpack Outdoor Sports Bag 3P Military Sactical For For Hiking Camping Climbing Waterproof Wear-Resing Nylon Bag
Izingane ngci Lunch Isikhwama Abafana Namantombazane, Lu ...
Lunch Box ngci Lunch Bag - ...
Ukushisa kwasemini ibhokisi isikhwama Leakproof Sakusihlwa Lungiselela Coo ...
Esebenza Lunch Bag nge Detachable ihlombe Str ...
Esikhulu Lunch Bag ngci Lunch Box Soft Cooler ...
Ibhokisi Lasemini Lama-Premium, Isikhwama Sokudla Kwasemini Samadoda ...